Ngabe i-Corgi Alaskan Malamute ixuba i-hybrid engcono kakhulu kuwe? - Izinhlobo
Uma ufuna inja yomklami eyingqayizivele eyinhlanganisela yama-purebreds amabili angenakuphikwa futhi athambile - uCorrgis noMalamute - khona-ke le pooch yinye okufanele uyicabangele.
Hlangana nomxube weCorgi Alaskan Malamute - Umthombo wesithombe
Qhubeka ufunda ukuthola okwengeziwe ngomxube weCorgi Alaskan Malamute, abanye abawubizayo Corgimute , ngakho-ke ungathola ukuthi kufanele yini ukuthole lokhu kuqhekeka.
Ingabe kukhona ukuhlanganiswa kwangempela kweCorgi Malamute?
Ngabe ukubukeka kwe-Corgi Alaskan Malamute kubukeka kanjani?
Isimo SikaCorgi Malamute
Ungayinakekela kanjani inhlanganisela kaMalamute Corgi
Ngabe iCorgi Malamute iyinja enempilo?
Ukuthola i-Corgi Alaskan Malamute mix Breeders & Rescues
Ukuzala Kufana nokuhlanganiswa kweCorgi Malamute
Ukufingqa Izinto Phezulu: Ingabe Kufanele Uthole Ukuhlanganiswa KweCorgi Malamute?
Yebo ikhona! Kodwa le hybrid ayivamile kangako. Izinja eziningi zabaklami zinemvelaphi engaziwa noma umlando, kanti ukuxubana kwe-Alaskan Corgi Malamute kungenye yazo.
Kungenzeka kungalindelwe, kepha ukufunda okuningi ngabazali bayo abangahlanzekile kuzosisiza ukuthi siqonde kangcono ukuthi ukuxubana kweMalamute Corgi kuzophuma kanjani ngobuntu nokubukeka.
Hlangana neWales Corgi
I- UCorgi , okusho ukuthi “inja encane” ngesi-Welsh, ingenye ye- izinja zokwelusa ezincane kakhulu . Yaqale yazalelwa eWales yanamuhla, lapho bezizozulazula khona izinkomo ngokuncinza ezithendeni zazo.
Ubuwazi ukuthi kunezinhlobo ezimbili zezinhlobo eziqashelwa ngokusemthethweni? Kukhona ’i I-Pembroke Welsh Corgi kanye ne- ICardigan Welsh Corgi .
Lapho kukhona Umehluko phakathi kwalaba bobabili, njengeCardigan ekubeni inkudlwana futhi inzima kunomlingani wayo wePembroke.
Baqale babonwa njengezinhlobo ezihlukile ngu Iqembu leKennel ngo-1932.
Le canine enesififane yaziwa ngobuhlakani bayo obuphakeme nezemidlalo ehlukile. Ngaphandle kokwakhiwa kwabo okuncane nemilenze, bangafinyelela kuze kufike ku-25 mph (40 km) lapho kugijima.
Ngenxa yemvelo yabo yokwalusa, uCorgis wenza izinja zokuqapha ezinhle kakhulu.
Uhlobo lwathandwa akekho omunye ngaphandle UQueen Elizabeth uqobo , enohlobo olungaphezu kuka-30 oluhlanzekile noluxubekile oluyingxenye yomndeni wasebukhosini wase-UK kusukela ngawo-1940 kuze kube namuhla.
Kwethulwa i-Alaskan Malamute
I-Alaskan Malamute ivela eqenjini lezinja le-arctic futhi ingenye yezinhlobo ezindala kakhulu zezinja. Igama layo livela esizweni esiqale sabazala, i Mahlemut Inuit .
Ngenxa yokubekezela kwabo okuphezulu namandla, baqale bakhuliswa donsela impahla enzima njengezinja zezihlibhi. Zinengubo ephindwe kabili eminyene, ezigcina zifudumele phakathi nobusika obubandayo be-arctic.
Ama-malamute athande ukuba khona kwabantu, kodwa into efanayo ayinakushiwo ngezilwane ezincane. Ngenxa yabo ukushayela okuphakeme , bavame ukuxosha amakati, onogwaja, izingwejeje, ngisho nezinja ezincane.
I- I-American Kennel Club yaqala ukuyibona ngo-1935, kwathi ngo-2010 yaba nge-Alaska inja yombuso esemthethweni .
Hlangana ne-Indie, ingxube ye-Corgi Alaskan Malamute - Umthombo wesithombe
Inkinga yokubikezela ukubonakala kwale hybrid ilele ekungabikho kolwazi ngayo.
Kunokuba ube yi-crossbreeds ethandwa kakhulu, umthombo wethu oyinhloko wolwazi uvela ekubukeni kwabazali bayo. Kepha, kukhona ukwehluka okukhulu ekubukekeni komzimba kukaCorgi noMalamute.
Ezimweni eziningi, lokhu kuqhekeka kuzogcina i- Ukubukeka komzimba kukaMalamute , ngaphandle kwe mncane, kodwa uqinile, umzimba ofana noCorgi .
Ungakanani umxube weCorgi Alaskan Malamute?
Njengoba kunikezwe umehluko omkhulu kakhulu phakathi kweMalamute neCorgi, singacabanga ukuthi inzalo yabo kungenzeka ibe ngu- inja emaphakathi nkulu .
Uma uhlala efulethini, inhlanganisela yaseCorgi Alaskan akuyona inja ekufanele. Le hybrid ethandekayo ifaneleka kakhulu emakhaya anendawo eningi, ngaphandle nangaphandle.
Ijazi nombala: Ingabe yi-hypoallergenic?
Lokhu akuyona ingxube ye-hypoallergenic Corgi . Bobabili abazali bangabadeli abadumile, kanti nemidlwane yabo iyalandela. Ngakho-ke, uma uhlushwa ukungezwani komzimba nomzimba, kufanele ucabangele ukuthola inja eyi-hypoallergenic.
IMalamute Corgi ine- ukuminyene , ijazi elikabili elingangenwa manzi , kuvame ukuvela ngokuhlanganiswa kwamabala amnyama, amhlophe, ompunga, noma e-orange namamaki.
Uma ukuthola kunzima ukubona ukuthi le hybrid ibukeka kanjani, ungakhathazeki, sikubambile. Nayi ividiyo yomxube weCorgi Alaskan Malamute evakashela umkhwenyana!
Hlangana noKona, ingxube yeCorgi Malamute - Umthombo wesithombe
Le fido ethandekayo inenhlalo kakhulu futhi iyathanda ukuba phakathi kwabantu, ibenze babe yisinqumo esihle izinja zomndeni. Yize benobungane ezinganeni, qaphela lapho laba bobabili bedlala.
Lokhu kuhlangana akusho ukulimala, kepha kungangqongqoza kalula ingane encane ngenkathi igxuma.
Kungakho singeke sincome ukuthi le ndlela yokuxubana ifakwe emindenini enezingane ngaphansi kweminyaka engu-10.
ICorgi Malamute inothando oluningi lokunikela, kepha hhayi kwezinye izilwane. Izakhi zofuzo zeMalamute ziqine kakhulu ngale hybrid, ngakho-ke ayisebenzelani kahle ukuhlala nezinye izilwane .
Ukuqeqeshwa kusengaphambili kwabantu kanye nokulalela kungasusa umuzwa wabo onjengezinyamazane, kepha singaluleka ukwethula esinye isilwane ekhaya lakho.
Ukukhathazeka ngokwehlukana kuyinkinga enkulu ngomxube weCorgi Malamute, ngakho-ke lapho umuntu abamthandayo engekho ekhaya, baba ukuphumula nokulimaza .
Yize bona can baqeqeshelwe ukunciphisa imikhuba yabo emibi, lokhu kungaba inqubo ende futhi eyinkimbinkimbi futhi kungenzeka ikubizele amafenisha amaningi.
Kwesinye isikhathi awunakho okunye ongakwenza ngaphandle kokushiya ingxube yakho ye-Malamute Corgi iyodwa. Esikhundleni sokuthembela kokuhle kepha ulindele okubi kakhulu, nazi ezinye izinto ongazenza ukuze uyeke ukuphazamisa ikhaya lakho.
Ungenzi isivumelwano esikhulu ngokufika nokuhamba kwakho . Ingqondo yenja yakho iye i-haywire njalo uma ubuyela ekhaya (noma ngabe uhambe imizuzu engu-5 kuphela), futhi ngenxa yalokho, iba nengcindezi lapho uphuma endlini.
Ungayinaki i-canine yakho emaminithini ambalwa okuqala, bese uqala ukuyiphulula kuphela uma seyizolile. Ngokwenza lokhu, uqinisa indlela yokuziphatha ezolile, futhi i-hybrid yakho izokuqonda ukuthi izothola izilwane ezifuywayo kuphela uma bezolile .
Elinye icebo ukushiya inja yakho neyakho izingubo ezisanda kugqokwa noma ukuvumela i-TV iqhubeke ngenkathi usaphumile. Umxube wakho weCorgi Malamute uzophazamiseka, futhi ubuchopho bawo abuzogxila ekubhekaneni nengcindezi yokungabikho kwakho.
Umzuzu ofika ngawo ekhaya, futhi, ulinde wehlise umoya bese uqhubeka nezilwane ezifuyiwe zansuku zonke.
Uma kukhulunywa ngokuqeqeshwa, uMalamute Corgi ohlakaniphile akantuli ubuhlakani bokuqonda imiyalo yakho; inenkani kakhulu futhi ayifuni ukukulalela. Uma ufuna i-canine elalelayo, kuzofanele uqale ngokuqeqeshwa kusukela eminyakeni yobudala bokuqala.
Imfihlo yokuqeqesha inhlanganisela yeCorgi Malamute miningi ukuphikelela, ukuqinisa okuhle, futhi ukwanelisa izidingo zalo zomsebenzi . Kuzodingeka uhlole womathathu lawa mabhokisi ngaphambi kokuthi ucabange nokuqala ngokuqeqeshwa kokulalela.
Lokhu kuhlangana kungaba yinselele ukuqeqesha, ngakho-ke uma ungeneme ngemiphumela, cabanga ukuyisa esikoleni sokulalela izinkolelo.
Ukuze unakekele kahle ijazi lezinja kule hybrid izodinga ukuhlangana njalo, kabili noma kathathu ngesonto . Bona kukhona ama-shedders asebenzayo, kepha ngesikhathi sabo sokushintsha ijazi, bazodinga ukunakekelwa kwejazi ngokuphelele.
IMalamute Corgi izozihlanza ikakhulu, ngakho-ke uboya bayo obufana noboya kufanele ishiywe ingagezwanga , ngaphandle kwezimo ezimbi kakhulu zokungcola.
Ngaphambi kokugeza iCorgi Malamute yakho, qiniseka ukuthi uyayishayela ingubo yayo njengoba lokhu kususa iziqubu zezinwele okunzima ukuzikhipha koboya obumanzi.
Yize kuvame ukukhohlwa, ukunakekelwa kwamazinyo nozipho kuyizinto ezibalulekile zale nhlanzeko yama-canines.
Amazinyo okuxuba e-Malamute Corgi azodinga ukuxubha okungenani kanye ngesonto, nokuncishiswa kwezipikili kabili ngenyanga.
Ngenxa yokuthi izindlebe zayo azisongiwe, lokhu kuxubana akuhlushwa izifo zendlebe kaningi njengezinye izinja eziklama. Lezi zidingo zokunakekelwa kwezindlebe ze-fido zilula, njengoba ukuhlanza ngobumnene umsele wayo wangaphandle ngebhola likotini kwanele.
Uma uqaphela ububomvu noma iphunga elibi kuvela ezindlebeni zayo, thatha inja yakho uye kudokotela wezilwane ngokushesha.
Ungalenzi iphutha; le hybrid akuyona inja ekulula ukuyinakekela, ngakho-ke singaluleka ukuthi uthathe ingxube yakho yeCorgi Malamute iye ku- udokotela wezilwane noma umkhongi ngezidingo zalo zenhlanzeko. Kulula kakhulu ukungcolisa okuthile njengokugunda isipikili esijule kakhulu ngengozi.
Yize lokhu kungelona udaba lwezempilo oluyingozi, kungakushiya uphethwe yikhanda elikhulu futhi ukhokhe imali ebiza imali yezilwane.
ICorgi neMalamute zingenye yezinhlobo ezisebenza kakhulu, futhi ukuxubana kwazo akufani. Ayikho inja efanayo, futhi inani lokuvivinya umzimba lokhu kudinga ukuxuba kuzohluka kunenja ngayinye.
Kepha, njengomthetho wesithupha, sincoma Amahora angu-1 kuya kwangu-2 wokuzikhandla nsuku zonke ngomxube wakho weCorgi Malamute.
ICorgi yakhuliswa njengenja eyelusayo, kanti iMalamute yaqala njengenja eyisihlibhi.
Ngokuya ngemvelo yabo enamandla, baphendula kahle kakhulu emisebenzini esebenzisa umzimba kunengqondo.
ICorgi Alaskan Malamute izothanda noma yiluphi uhlobo lokuzivocavoca umzimba kodwa izothanda kakhulu ukugijima, izintaba, noma ukudlala ukulanda .
Njengezinja eziphakathi nendawo ukuya kwezinkulu, inhlanganisela yeCorgi Malamute izodinga Izinkomishi ezi-3 ukuya kwezi-4 zokudla kwenja ngosuku, kuya ngosayizi wabo namazinga womsebenzi. Khumbula ukuthi le ndlela evundlile ijwayele ukuqunjelwa, ngakho-ke qiniseka ukuthi awuyinciphisi ngokweqile.
Ngoba basebenzisa amandla amaningi nsuku zonke, a Ukudla okuneprotheni ephezulu kuqukethe ukudla okomile nokheniwe ilungele kangcono lokhu kuhlanganiswa. Futhi ungasebenzisa amavithamini namaminerali ukuqinisa ukukhula kwabo kwamathambo nokukhulisa amasosha abo omzimba.
Qiniseka ukuthi ungadluli ngokweqile ngokusetshenziswa kwamaminerali wakho we-canine, njengoba lokhu kuxubana kunenkinga yesifo sofuzo lokho ngaphezulu kuthatha i-zinc ngokuqondene.
Lokhu kubekwa ngokweqile kungaholela ezimeni ezahlukahlukene zesikhumba ngenhlanganisela yeCorgi Alaskan Malamute.
Izinja zomklami zivame ukukhiqizwa ukuqeda isifo esisodwa noma eziningi zabazali bazo zofuzo. Ngenhlanhla, abalimi bakwazile ukuphumelela kulo msebenzi, futhi le hybrid engacabangi ibhekwa njengephilile, enokuphila okulingene Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15.
Izinkinga zezempilo ezivame kakhulu lobu buso obuhlanganisiwe ukuqumba , i-hip dysplasia, futhi ngamehlo. Okunye ukukhathazeka kwezempilo okwaziwayo kukhona i-hypothyroidism , izingqinamba zamehlo nezesikhumba , amatshe we-cystic , futhi isithuthwane .
Yize kunezimo eziningi iCorgi Malamute yakho engayithola njengefa, ingilazi igcwele isigamu kunokuba ingabi nalutho. Iningi lalezi zimo kungaba njalo iphathwa kalula , futhi azisongeli impilo .
Isibonelo, kuze kube yiminyaka embalwa edlule uma i-fido yakho yathuthukisa i-cataract, ukuhlinzekwa kwakuyiyona ndlela kuphela. Kepha, njengoba isayensi nemithi sekuthuthukile, ukwelashwa okungahlinzeki izinketho seziyatholakala, kusetshenziswa amaconsi wamehlo ukusula umbono wayo wezinkolelo.
Umdlwane we-Alaskan Malamute Corgi uzobiza phakathi $ 1200 no- $ 1700 . Ngenxa yokutholakala kwalesi siphambano, asikwazanga ukuthola noma yibaphi abalimi abasemthethweni beMalamute Corgi.
Uma uphikelela ekutholeni lokhu kuxubana, iseluleko sethu esingcono kakhulu kungaba ukuthi uhlole nezindlwana zakho zasendaweni zaseMalamute naseCorgi.
Asikwazanga ukuthola okutakuliwe okugxile kule hybrid futhi, yingakho sifake izindawo zokukhosela zaseCorgi nase-Alaskan Malamute. Hlola lezi zimfundiso futhi wamukele umngane wakho omusha waphakade!
Hlakulela i-Pet - Odin (Alaskan Malamute Mix AZ)
Hlakulela a Pet - Mika (I-Alaskan Malamute Mix CA)
Ukutakula Kwaseningizimu-mpumalanga yeCorgi (ICorgi Mix NorCal)
Ukutakulwa kweTexas Corgi (ICorgi Mix TX)
Umxube weCorgi Samoyed
Hlangana noKomi, inhlanganisela yeCorgi Samoyed - Umthombo wesithombe
Abasekiwe kungumphumela omuhle wokuzalanisa i-Arctic Samoyed neWales Corgi.
Le nhlanganisela yeCorgi Samoyed kungathathwa njengolaka , nabanikazi bathi inesimo esifana ne-Corgi esifana kakhulu.
Lezi zinja zinamajazi aminyene futhi zithanda ukusondeza eqhweni, ngakho-ke zikulungele kakhulu ukuhlala kuzo isimo sezulu esibandayo .
I-Alaskan Malamute Samoyed mix
Hlangana no-Ylva, ingxube ye-Alaskan Malamute Samoyed - Umthombo wesithombe
Umxube we-Alaskan Malamute Samoyed, owaziwa nangokuthi i- Malamoyed , iyi-hybrid eyindlala, futhi mhlawumbe ngeke ikwazi ukuthola noma yibaphi abalimi abasemthethweni bale nhlanganisela. Ngezikhathi ezithile ungahlangabezana nalokhu okuxubile ezindaweni zokukhosela.
Umxube weMalamute Samoyed cishe uzoba nejazi eliminyene elikabili, eza ngenhlanganisela ye- mhlophe, mnyama, futhi mpunga .
Yize kungashiwo ukuthi hlobo luni lomoya oluzoba nawo, ukwahlulela ngabazali bobabili, le ngxube kungenzeka ibe yinja enamandla ngokomzimba enezidingo zomsebenzi ophakeme.
Ukuhlanganiswa kukaCorgi Husky
Hlangana noBella, inhlanganisela yeCorgi Husky - Umthombo wesithombe
I-lovechild ye-Welsh Corgi ne-Arctic Husky ihamba ngamagama amaningana njengoHorgi, uCorgski, noSiborgi.
Lesi sihlahla esinqamulelayo siziqhenya, ingubo engangenwa manzi, okungaba okuphakathi noma okude.
IHorgi iyiphupho elibi uma kuziwa ekunakekelweni kwengubo, njengabazali bayo bobabili abahlaseli abadumile . Izikhathi zokuxubha nsuku zonke nezokuzilungisa zanyanga zonke ziyisidingo sale hybrid.
ICorgi Alaskan Malamute Mix yenzela inja yomndeni enhle kakhulu, futhi izibopho ngokujulile nabantu eyithandayo.
I-crossbreed ilungele kangcono imindeni enezindlela zokuphila ezisebenzayo, njengoba idinga ihora elilodwa kuya kwamabili lokuzivocavoca nsuku zonke.
Le ndlela evundlile inengubo ephindwe kabili efana noboya, okuthi akuyona i-hypoallergenic futhi kudinga ukuxubha nsuku zonke. Kuzodingeka futhi ukuthi uthathe ingxube yakho yeCorgi Malamute iye kumkhokheli oqeqeshiwe njalo ezinyangeni ezimbalwa.
IMalamute Corgi ithathwa njengezinja ezinempilo, kepha into eyodwa okufanele uyiqaphele yi- amazinga e-zinc hybrid .
Le nhlanganisela imunca amaminerali ngokweqile, idale izimo zesikhumba ezahlukahlukene.
Ungathanda ukuba umnikazi oziqhenyayo wenhlanganisela yeMalamute Corgi? Noma mhlawumbe usuvele unayo? Beka noma yimiphi imibuzo yakho noma okuhlangenwe nakho kwakho ngalolu hlobo kumazwana angezansi!
I-Affenpinscher - Ongakulindela Kule Nja Yokuzala
Ngabe iPembroke Welsh Corgi ethandekayo iyinja engifanele?
Izinganekwane namaqiniso ngePocket Pitbull
I-AZ yamagama abelusi baseJalimane (Amagama angama-150 + Owesilisa, Owesifazane NamaPuppy GSD)
IGolden Cocker Retriever - Umhlahlandlela Wokuxuba we-Ultimate Golden Retriever Cocker Spaniel
IGentle Giant: Ngabe ukuxubana kweGreat Dane Lab kungokwakho?
I-Teacup Yorkie: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
I-Kerry Blue Terrier Dog Breed Information & FAQs
Collie Inja Ukuzala Ulwazi
Umxube weCorgi Husky: Konke Odinga Ukukwazi
kukhiqizwa kanjani amalebhu esiliva
ibhubhu emnyama lab intombazane
yini inja yetamaskan
intaba cur exutshwe nelab
Izingxube ze-pitbull lab zikhulu kangakanani
abelusi abamhlophe bejazi elide